Sei Kuve Relatable Influencer Inogona Kukubatsira Iwe Kukurisa Yako Instagram Akaunti - TurboMedia.io
musha » Sei Kuve Relatable Influencer Inogona Kukubatsira Iwe Kukurisa Yako Instagram Account
Instagram yakauya kure kubva payakatanga muna 2010 seyakakosha yekugovera mafoto app. Yakashanduka kuita imwe yemapuratifomu ane simba kwazvo pasocial media munyika nhasi, ine vanopfuura bhiriyoni imwe pamwedzi vanoshanda. Instagram inonzi zvakare nekupa kusundira kune inopesvedzera tsika, iyo yakatanga imwe nguva pakuvhurwa kwayo. Izvi zvinogona kutsigirwa neshumo inoti iyo Instagram influencer musika waikodzera kutenderedza $ 1.7 mabhiriyoni 2019. Tichifunga nezvemaitiro, inotarisirwa kuwedzera zvakanyanya mumakore anotevera.
Iwe unoda here Instagram nyanzvi kuti upedze zvakadzama ongororo yeako Instagram account uye kukupa iwe nehurongwa hwekuita?
Isu tinopa nyanzvi Instagram Optimization & Hashtags Basa rekutsvagisa
Vanofurira vanoita basa rakakosha mukuwedzera kubatikana pakati pevashandisi nekugadzira zvakasarudzika izvo zvinoenderana nevateereri. Izvi zvinogona kunge zviri chero chinhu kubva pakuongorora kwechikafu, zvipfeko zvekukwevera, maratidziro emhando kune skincare zvemukati. Saka chii chinotora kuti uve munhu anofurira pachikuva? Muchikamu chino, isu tichaongorora kuti kuve munhu anotenderwa anogona kukubatsira sei kukura yako Instagram chiteshi.
Relatable Content uye Instagram Influencers
Instagram influencers vanowanzoonekwa sevari kufambisa simba kuseri kwekukura kwechiteshi. Izvi zvinodaro nekuti vanokoka vateveri vavo muhupenyu hwavo, izvo zvinozotungamira mukugadzwa kwekuvimba muvateereri.
Maererano Chirevo cheTsika dzeKufurira, vazhinji vevatengi pakati peMireniyamu uye huwandu hweGen Z vanowanzo tevera Instagram vapesvedzera vavanofunga kuti vane hukama. Ongororo yakaitwa pamaitiro ekushandisa kwezera iri, iro rakaona kutora chikamu kwe500 vatengesi vechidiki kubva kuUnited Kingdom uye vakatenderedza 1,000 kubva kuUnited States. Vanosvika 89 muzana yevakabvunzwa muongororo iyi vakati vanotevedzera ivo vanogadzira zvemukati, izvo zvavaitenda sevanhu vakanaka. Zviripachena kubva muchidzidzo ichi kuti vatengi vadiki ava vanosarudza kutevedzera vanofurira vanhu vasingaite sevapesvedzera. Brands nevapesvedzera vari kutsvaga kuwedzera kusvika kwavo pachikuva vanofanirwa kutora maonero avo. Izvi zvakanyanya kukosha nekuti ava vatengi vadiki ndivo zvakare boka guru revatengi vedhijitari panguva ino.
Kana iwe uchida kuwedzera kusvika kwako seanofurira pachikuva, zvakakosha kuve shamwari pane mutengesi. Kana iwe uchikwanisa kugadzira zvinogoneka zvemukati zvinobudirira, zvichabatsira mukuunza kubatanidzwa muchimiro che Instagram maonero, zvaanoda, uye kugovera. Kunze kweizvi, iwe unozogona kugadzira hurukuro yakatenderedza izvo zvaunogadzira.
Mazano ekugadzira Zvinoenderana Zvinoenderana
Kugadzira zvirimo izvo vanhu vanoona zvine hukama harisi basa riri nyore. Iwe unofanirwa kukudziridza kunzwisisa kuri nani kwevateereri vako uye zvavanofarira. Heano mamwe matipi ekugadzira zvinogoneka zvemukati pa Instagram.
1. Ibva pane otomatiki zvinyorwa
Zvakakosha kuisa zvinhu zvevanhu mune izvo zvaunogadzira, izvo zvinobvumira vateereri kuti vabatane newe. Zvemukati zvako zvinofanirwa kunge zvine hukama nechinhu chiri chikamu chehupenyu hwako uye chinobvumira vanhu kugutsurira mukuziva.
2. Iva asina simba
Vanhu vazhinji vanowanzoda vanhu vanoratidza kusagadzikana pasocial media. Kana iwe uchida kugadzira zvirimo zvinogoneka, usavanza kukanganisa kwako kubva kune vateereri. Iwe unogona kuratidza kusagadzikana kwako pamberi pavo uye kutsanangura kuti zvakakubatsira sei mukudzidza chimwe chinhu muhupenyu.
3. Relatable Humor
Usatya kuwedzera kuseka kune zviri mukati mako. Humor mutauro wepasirese uyo unokutendera iwe kugadzira hukama nevateereri vako padanho repedyo. Kana iwe uchikwanisa kugadzira zvirimo zvinosekesa zvechokwadi, kuwana kurudziro kubva mumamiriro ezvinhu chaiwo ehupenyu, zvinonyatsoenderana nevateereri vako.
Kugadzira zvinogoneka senge munhu anofurira hazvisi nyore, asi neaya matipi, iwe unozogona kushandisa ari nani nzira dzekuwedzera kubatikana pa Instagram. Kuve ane hukama pesvedzero kunozobatsira mukusimudzira nharaunda yakabatanidzwa, uye iwe unozokwanisa kukwezva kwakawanda mhando kubatana. Kana iwe uri kutsvaga kutangisa kukura kwako pachikuva, unogona kufunga kutenga yemahara Instagram anoda, yemahara Instagram vateveri, uye emahara Instagram makomendi kubva kuTurbomedia. Nemasevhisi aya, iwe unozogona kuwedzera kuvimbika uye kuzivikanwa kweiyo Instagram mbiri, uye nekufamba kwenguva izvi zvinogona kubatsira mukukura kweakaundi yako. Kuti uzive zvakawanda nezve masevhisi edu, taura nesu nhasi!
Sei Kuve Relatable Influencer Inogona Kukubatsira Iwe Kukurisa Yako Instagram Account neTurboMedia Chikwata, 4 April 2022
5 Nyore Nzira dzeKushandisa Yako Instagram Zviitiko Kumutsa Vatsva Vateveri
Isu tinoziva kuti chii chinobudirira kana iwe ukawana mutsva muteveri ziviso pane yako nharembozha! Isu tinonzwisisa kukosha kwemuteveri wega wega kune yako Instagram peji uye bhizinesi, tichifunga chokwadi chekuti…
Epamusoro 5 Nzira Dzakakwira Instagram Kufarira Inogona Kubatsira Yako Brand Marketing
Kune mabhizinesi mazhinji, Instagram ndiyo yekuenda-kupuratifomu yekushambadzira brand. Pane zvikonzero zvakawanda Instagram iri kudarika mamwe mapuratifomu ekushambadzira kwemhando. Kutanga, mamirioni anogara ari pa Instagram. Vazhinji vechidiki…
Anotyisa Poll Pfungwa dzekuti Uchengetedze Vateereri pa Instagram
Vanopfuura makumi matanhatu muzana emabhizinesi pa Instagram Nhau vanoshandisa kutaura, Insta mapota kana ma hashtag mwedzi wega Vanopfuura mamirioni mazana mashanu vashandisi ve Instagram vari kushandisa nyaya mazuva ese. Hakuna kumbove nenguva iri nani yekushandisa…